Kusvirwa naBaba Kudzie – Vanoda Zvinhu
· Updated November 24, 2014
Kwakange kwatopera mwedzi inokwana 5 kudai azvarwa. Baba vake ndakanga ndavaona ruviri chete panguva yese iyi sekuti pakanga pasina kuwirirana pakati pedu nenyaya yechana ichi, uye ndaigara nevabereki vangu. Chero pandakadzokera kuflat kwangu Kudzi ave ne 4 months, taive tisati tamboonana. Baba vaKudzai vainge vakatoroora kare uye vaine zvana zvavo zvina, saka vainge vasina kufara nemimba yakudzi yandakazoita.
Pamwedzi mishanu yese iyi, ndakange ndave kutofunga zvangu kuti semuusikana wechidiki kudai, dai ndazviwanirawo andiingadanane naye pavakomana vese vaigarondipfimba pese pandaifamba. Ndaiti ndikasiya mwana ndomboenda kumaclubs, marestaurants, movies, nedzimwe nzvimbo dzekufara, ndainetswa nevakomana vakawandisa vachindida asi ndichiramba hangu semunhu aida kuzvibata uye ndaieve nekacheche. Asi ndakange ndogaronzwa ropa rangu kupisa nekumhanyamhanya nekuda kukwirwa semunhu akange agarisa. Ndaiti kana ndikarara hope dzainonoka kuuya ndichingofunga makwirigwo andingade kuitwa. Pamwe ndaimbofunga ndichiiswa nerefurefu yakatetepa, pamwe ndombohwa ndichida rino zipfupi zigobvu gobvu. Pamwe ndaimbohwa ndichida kuitwa nekumashure, pamwe ndombohwa ndichida kukwira pamusoro inindega ndonyatsozvibatira mboro ndoipinza mubeche rangu pamadiro. Pamwe ndaitombozwa ndichitoda kuiswa mumhata chaimo. Pamwe ndaimbofunga zvekuyamwa mboro, pamwe ndombohwa ndichida kunanzviwa clitoris yangu. Ndaiti ndikabatiwa nepfungwa idzi mheche yese yaibva yanyorova, ndozopedzisira ndave kutambisa ndega clitoris yangu. Musi wakauya babavaKudzai pfungwa idzi dzaitenge dvavekunyaya. Kudzai chakanga chichangopedza kuyamwa chikakotsira. Kuyamwa kwachaiita minyatso yangu ndakabva ndavhara maziso ndonzwa kunge ndiri kuyamwiwa nemumwe mukomana andakanga ndaevegwa naye ku dinner kwandakange
ndaenda neshamwari dzangu marumwezuro achoni. Handina kana kuzoona kuti chana chatokotsira, kana kuti ndakaisa sei ruvoko muburukwa rangu, idzo pfungwa dzangove dzekukwigwa nemukona uyu. Kana pakagogodza baba Kudzie handina kana kumbozvihwa, ndokutozovhunduka ndohwa munhu achiti ‘ko zvamuchabiwa muchikotsira magonhi akashama kudai?’
‘Ah, ko inga ndibabaKudzie. ko munobvanepi munongouya musina kanakumbofona? ‘Ndangoti ndipfuure ndichikuonai. Akadii kudzi. inga akura chaizvo. Ko kurara masikati ano asi ari unogwara? ‘Kurwara kwaani, chinokara chana chako ichi. Tarisa uone kuonda
kwandatoita nekungogara ndichiyamwiwa pese pese! “kuonda kupi? ko sei kurara ruvoko ruri mubhurugwe wakaisa hako zvinhu
zvese pachena kudai?’ Ndakahwa kakusvoda sekuti ndakange ndisina kuone kuti ndizvo zvandakanga ndakaita. Ndisati ndambopindura ndakabva ndahwa rurimi gwababa kudzi rwopinda mukanwa mangu vachitondikisa, rumwe ruvoko
gwavo rodzika kumagaro angu.
Ndakavhura muromo ndovakisawa, uku ndichiita kunge munhu ashamisiwa nezviri kuitika. ‘makiya here door? mumwe munhu angangopinda?’ Rume rakasvetuka ndokunokiya. Parakadzoka ndakaona inga trousers ririkuita kunge richabvaruka pamberi nekumira
kwakange kwatoita zimboro, ratozvimba pamberi pese apa kunge vaviga zibroiler muburugwa. Vakagove vaive nerino zishondo zidemadema rine musoro mutsvukutshuku. Ndakabva ndanzwa kupera simba. Vakabva vangoti hembe katanu katanu vachikanda kwakadaro uku, ndokungosvika pamubhedha vachikatanurawo nedzangu, vachifemera pamusoro kunge munhu anomhanyisiwa. Iro zimboro rakange rakamira kunge museve wakabhenda, zvekuti ndakatombohwa ndichida kuseka. Asi handina kuseka nekuti ukuwo
ndakange ndohwa kuda kudoitiwa nguva iyoyo. [Kudzi akasimudziwa ndokunzi mucortbed zvekuti ndakafunga kuti achamuka masimudzirwo aacho, asina haana.
Zirume rakadzoka pamubhedha. Harina kana kuzomboita zvese zveforeplay nekuti rakange ravekutonzwa nemoyo. Kana neniwo ndakange ndisisagone nekuda kuiswa. Rakangosvikosimudza makumbo angu ese ndokuaisa pamafudzi aro rakandishadaburisa kuti rimwe gumbo uku rimwe uko, ndokuda kuibairira mukati in one smooth movement, asi richibva rapotsa
beche completely because he was in such a hurry.
Ndakahwa kupisa mboro ichipfuura nepamusoro pemhata ichinobayirira pamagumbezi. Ndakabva ndaitidzvi, neruoko rweroboshe, ndokuinangisa chaipo pabeche rangu rainge ratonunira zvaro kare. Ndakaidhonzera mukati zvishomanana, ndisati ndambodii zirume richibva raiti yese mukati mvooo. Sebeche rakange ratotota kudai kudhara haina kana kumbonetsa kupinda.
Ndakangonzwa kupisa kusvika paguvhu chaipo ichipinda.
Ndakada kuridza mhere nekunakigwa. Ndakabva ndatenderedza maoko angu ndokuvabata magaro ndichichemerara ndichiti “babaKudzi kani, baba kudziiiiii, babakudzi kani baba….maiweeee, mandiuraya kaaaaani!!!” “Svira kani babaKudzi, ndisvire kani. Usatunde babakudzi, pleaaase usatunde, ndisvire kaaaani!!. Iro kana kumbotaura, richingogomera chete nekukovira richingoti Hm, Hm, Hm, Hmmmmm, Hm, Hm, Hmmmmm!
Rakambomira zvishoma richichinja position kuti rinyatsobalancer nemabvi nemagokora, risanyanye kundidzambidzira. Ndiporakachitanga kundisvira zvegore rese manje. Ndakaedza kuti nditi baba Kudzie, izwi rikaramba kubuda. Kuti ndidzikise makumbo akaramba akahakwa pamafudzi.
Kuti ndibatanidze magaro akaramba akavhurika nezvakanga zvakaitiwa makumbo angu. Kuti ndiridze mhere, asi hapana chakabuda. Makumbo angu aive akangokandwa pamafudzi, beche rakanyatsovhurwa zvese nemhata. Babakudzi raive rongogomera nechikapa, ukuwo kuchingonzwika machende achirovera pamhata yangu kuti pa, pa, pa, pa, iyo mboro ichipinda nekubuda mubeche kunge piston. Hamheno kuti ndakakwirwa kwenguva yakadii. Ndakazotanga kuhwa chinenge chiveve here chichitangira mutsoka dzangu, chichikwidza nemakumbo, nemuchiono. Ndopachakazopinda
nechemudumbu. Ndakazongoona kwavekuita kunge denga ririkuputika nenyenyedzi dzakawanda, mafireworks chaiwo mumusoro mangu, neniwo ndichiita kunge ndirikuputikawo!
Next story Kusvirwa na Landlord
Previous story Kusvirwa nebhinya season 1